I-Dolphin Beach E5
UMelissa unezimvo eziyi-248 zezinye iindawo.
Yiva iholide ongasoze uyilibale eKapa. I-Dolphin Beach imema abakhenkethi ukuba banandiphe okona kuphumla konxweme, kufutshane nezinto ezininzi ezinomdla. Eli gumbi lihle linamagumbi okulala amathathu linokuhlalisa ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-6. Yonwabela ukuzola kwamaza antlithekayo kunye nesibhakabhaka esiqaqambileyo phantse unyaka wonke, kunye nolwandle olumnandi, iNtaba yeTafile kunye neRobben Island.
Ekungeneni kweli gumbi langoku, elinemigangatho emibini yokuzenzela ukutya, iindwendwe ziya kudibana ngokukhawuleza neembono zolwandle, ngelixa isicwangciso esivulekileyo seendawo zokuhlala zinesitayile kwaye zilungele iimfuno zeendwendwe. Yonwabela uqhagamshelo lwe-DSTV kumabonakude okwiscreen esicaba kwigumbi lokuphumla, elivulayo likhokelela kumgangatho owenziwe ngefenitshala onendawo yokuqhotsa inyama kunye negadi eluhlaza enokufikelela ngokuthe ngqo elunxwemeni. Indawo yokutyela inokuhlalisa ukuya kuthi ga kwi-6 abantu, ngelixa ikhitshi eligcweleyo liqulathe zonke izinto eziyimfuneko ukubetha isidlo esimnandi.
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-248 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Idolophu yaseKapa enomtsalane engaselunxwemeni iBloubergstrand yindawo ethandwayo yeeholide, ibonisa ubuhle nobugqi boLwandlekazi lweAtlantiki kunye nemibono ebalaseleyo yeTable Mountain ukusuka kwindawo elungele usapho elunxwemeni. Ukusefa kunye nekitesurfing zizinto ezithandwayo onokuzonwabela xa undwendwela iBlouberg kunye nothotho lweendawo zokutyela ezijonge elwandle kunye nezinto ezinomtsalane zikwanomtsalane kwiindwendwe. IMother City kukumgama omfutshane wemizuzu engama-20 xa uhamba ngemoto, ufikeleleka lula ngokukhwela ibhasi yeMyCiTi okanye u-Uber.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R2000